သွေးရည်စက်တို့ထိမှန်ခြင်း – Grab Love Story
ကွင်းထဲသို့ မအေးမြင့် မသွားချင်တာ အမှန်ပင်။ မိုးကုန်သွားပြီဆိုပေမယ့် တစ်ညလုံးကျထားသော ဆောင်းနှင်းတွေကြောင့် ကန်ဇင်းရိုးတွင် ချော်ချော်ချွတ်ချွတ် ဖြစ်နေသေးသည်။
သွားရမည့်အချိန်ကလည်း မနက်စောစောသွားဟု အရီးလေးက ခိုင်းထားသည်။ စီးနေကျ သားရေစိမ်းဖိနပ်ဆို ဝေးရော့…။ ဖိနပ်စီး၍ရသည့်ခရီးမဟုတ်..။ ဒါကိုဘဲ မအေးမြင့် စိတ်ညစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
သွားရမည့်ခရီးကလည်း မအေးမြင့်တို့ ကျုံတာရွာမှ တစ်နာရီနီးပါးလျှောက်ရမည့် ကွင်းခေါင်ခေါင်မှ ကိုသာစိန်၏ လယ်တဲကို ဖြစ်သည်။
သီးထပ်စိုက်သဖြင့် ကိုသာစိန်တို့လင်မယားက တဲတွင်ပြောင်းနေသည်မှာ တစ်လခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကွင်းထဲသွားတာ ဝေလီဝေလင်း ထ၍လာရသည်။ နေထွက်မှဆိုလျှင် နေပူဒဏ်ကို မခံနိုင်။
ဒီနေ့ စပါးဝယ်မည့်သူ လာမည်ဖြစ်သဖြင့် စပါးခြင်ရန် ကိုသာစိန်အား အရီးလေးက ခေါ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ တခြားလူတွေကို ခေါ်၍ခြင်ခိုင်းရင်လည်း ရတာပါပဲ..၊ ဒါပေမယ့် မအေးမြင့် အရီးလေးကို မပြောဝံ့ပါ..။ အရီးလေးတို့လို ရှေးဆန်သော လူကြီးတွေက တော်တော်များများကို ပုံသေမှတ်ထားတတ်ကြတာ မဟုတ်လား..။
မအေးမြင့် ဒီလယ်ကွင်းနှင့် လယ်အလုပ်ကို မလုပ်ချင်၍ အပင်ပန်းခံကာ စာကြိုးစား၍ ကျောင်းတက်ခဲ့သည်။ အခု ကျေးရွာကောင်စီ စာရေးဖြစ်နေရုံမျှမက စာပေးစာယူဖြင့် ဘွဲ့တစ်ခုလည်း ရခဲ့ပြီ။ အခု သူမအသက် ၂ရနှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ အများကတော့ အပျိုကြီးဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသည်။
ဒီလိုအပျိုကြီးဖြစ်ရတာကလည်း ရေမြေလိုက်သွားတာဖြစ်မည်။ မအေးမြင့် ၏ မိဘသားချင်းများက ကျုံကျိုက်ရွာတွင်ရှိသည်။ ဒီကျုံတာရွာမှာက မအေးမြင့်၏ ဖိုးအေဖွားအေများက သူမ၏အရီးလေး မအုံးနှင့် အတူနေခဲ့သည်။ အရီးလေးမအုံးက အပျိုကြီး ။ နောက်တော့ ဖိုးအေဖွားအေများ ဆုံးသွားပြီး အရီးလေးက တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတော့ မအေးမြင့်ကို ခေါ်၍ အတူနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မအေးမြင့် အရီးလေးထံ ရောက်တော့ အသက် ၁၀ နှစ်သမီးသာ ရှိသေးသည်။ အရီးလေးက လယ် ၁၅ ဧကကျော်ကျော်ရှိသည်။ အခုနေသည့် ပျဉ်ထောင်အိမ်း ဆောက်ထားသည့်ခြံကြီးကပဲ နှစ်ဧကနီးနီး ရှိသည်။
ဒီလယ်ဒီခြံအပြင် စပါးပေး၊ ငါးပေး ပေးကာ အရီးလေးနှင့် မအေးမြင့်တို့ တူဝရီး ချောင်ချောင်လည်လည်ဖြင့် မအေးမြင့်ပင် ဘွဲ့တစ်ခု ရခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အခုတော့ အရီးလေး၏ အသက်က ခြောက်ဆယ်ကျော် ခုနှစ်ဆယ်အတွင်း ကပ်နေပြီ။ စိတ်ထင်တိုင်း မသွားနိုင်မလာနိုင်တော့သဖြင့် မအေးမြင့်ကို ခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သွားစလျှောက်စ နည်းသဖြင့် မအေးမြင့်၏ ခြေဖဝါးတွေ နာလာသည်။ အရေးထဲ မအေးမြင့်က နီတွတ်ကို သတိရလိုက်သေးသည်။ နီတွတ်ဆိုတာက အသက် ၁၆နှစ် ၁ရနှစ်လောက် ကောင်လေး..။ ရွာတွင် ကျွဲကျောင်းနွားကျောင်း သူရင်းငှားလုပ်နေသူဖြစ်ပြီး ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေလို နေသူဖြစ်သည်။
ခိုင်းစရာရှိလျှင် နီတွတ်ကို ခေါ်၍ခိုင်းနေကျဖြစ်သည်။ အခုနီတွတ်က သူ့ဦးလေးနှင့် အင်းထဲသို့ လိုက်သွားသည်။ မနက်မှ ပြန်လာမည်။ ဒါကြောင့် မအေးမြင့် အခု ကွင်းထဲသို့ ကိုယ်တိုင်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
မအေးမြင့် ခေါင်းတွင် ပတ်၍ပေါင်းထားသော သဘက်ကို အတန်ငယ်မ၍ နဖူးမှစို့လာသော ချွေးကို လက်ဖဝါးဖြင့်သုတ်ရင်း ရပ်လိုက်သည်။ ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုသာစိန်၏တဲကို ခပ်ပျပျလေးမြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ အားတင်း၍ မအေးမြင့် ဆက်လျှောက်လာခဲ့လေသည်။
သာစိန်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဟိုးခပ်ဝေးဝေးက လျှောက်လာနေသည်မှာ မအေးမြင့်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းမိလိုက်သည်။ မြင်လိုက်သည်နှင့် ဒီလိုခန့်မှန်းသိရှိလိုက်ရခြင်းကလည်း မအေးမြင့်က တခြားသူတွေနဲ့ မတူ..။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ထူးထူးခြားခြား အချိုးကျလှပသည်။ တစ်ရွာလုံးက ယောက်ျားတွေ မအေးမြင့်ကိုတွေ့လျှင် လီးမတောင်သူ မရှိသလောက် ဖြစ်သည်။
တွေးရင်းကပင် သာစိန် စိတ်တွေထလာသည်။ သာစိန်ဆိုတာကလည်း အသက် ၄၀ အရွယ် သန်တုန်းမြန်တုန်း ဖြစ်ကာ မိန်းမကိစ္စလည်း ဝါသနာကထုံသေး၏။ အခုမယားကြီးဆုံး၍ နောက်တစ်ယောက်ယူထားသည်မှာ လပိုင်းမျှသာ ရှိ်သေးသည်။ သာစိန့်မိန်းမ ခင်ရွှေက မအေးမြင့်နှင့် အသက်ချင်း မတိမ်းမယိမ်း..။ ပြီးတော့ မအေးမြင့်၏ ဖွားအေဖက်က ညီအစ်မဝမ်းကွဲလည်း တော်သေး၏။
အချိန်က နေထွက်လာတာ နေကျွတ်ရုံသာရှိသေးသည်။ သာစိန်က မအေးမြင့်မှန်း သိလိုက်ထဲက အရီးလေးခိုင်းလိုက်သဖြင့် သူ့ထံလာနေခြင်း ဖြစ်သည်ကို အတတ်သိပြီးဖြစ်သည်။
သာစိန်အတွေးတစ်မျိုးရကာ နွားစာစဉ်းနေရင်းမှ တဲထဲသို့ ဝင်ခဲ့လိုက်သည်။ တဲထဲတွင်တော့ မိန်းမဖြစ်သူ ခင်ရွှေက ပက်လက်လေး အိပ်ပျော်နေသေးသည်။ မနက်မိုးလင်းခါနီး လင်းဆွဲ ဆွဲထားသဖြင့် ခင်ရွှေတစ်ယောက် မောမောဖြင့် အိပ်ပျော်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ခင်ရွှေ၏ ရင်ရှားထားသော ထဘီက ရင်ဘတ်ပေါ်ကနေ ပြေလျော့ကာ ဗိုက်ပေါ်သို့ရောက်နေသည်။ ယောက်ျားကြီးလက်သီးဆုပ်နီးနီးလောက်ရှိသော နို့ကြီးနှစ်လုံးက လုံးတစ်ပြောင်တင်း၍ ထွက်ပေါ်နေသည်။ သာစိန် စို့ပါကိုင်ပါများသဖြင့် နို့သီးကလေးတွေက နီညိုရောင် သန်းနေချေပြီ..။
သာစိန်က သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ဝတ်ထားသော စစ်အင်္ကျီအဟောင်းကြီးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ခါးမှ ပုဆိုးကိုလည်း ချွတ်ချလိုက်သည်။ သာစိန် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည်။ သူ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဖွားဖက်တော် လီးကြီးက အကြောတောင် မာကျောနေပြီ..။
သာစိန် တဲအပြင်သို့ ခေါင်းပြူ၍ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့တဲထံသို့ ဦးတည်၍လျှောက်လာနေသော မအေးမြင့်ကို လူလုံးကွဲကွဲပြားပြား မြင်နေရပြီ..။ ခဏကြာလျှင် တဲသို့ မအေးမြင့် ရောက်လာတော့မည်။
သာစိန် သူ့မိန်းမ ခင်ရွှေ့ဘေးသို့ ဒူးထောက်၍ထိုင်ချလိုက်ပြီး ခင်ရွှေ၏ကိုယ်လုံးကို အသာဖက်၍ မလိုက်သည်။
အိပ်ပျော်နေသော ခင်ရွှေ နိုးသွားသည်။
“ ဟင်…….ကိုသာစိန် ..ဘာလုပ်အုံးမလို့တုံး….”
“ ဒီမှာလေဟာ.. ငါ မနေနိုင်တော့လို့ တစ်ခါလောက် လုပ်အုံးမလားလို့…”
ခင်ရွှေ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ပြေလျော့နေသော ထဘီကို ဆွဲချွတ်နေရင်းက တောင်မတ်နေသော သူ့လီးကြီးကို ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ ကော့၍ပြလိုက်သည်။
သာစိန်က ကာမအရသာ ခံစားခဲ့တာနှစ် ၂၀ ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ မခင်ရွှေက ဒီအရသာကို ခံစားဖူးတာ လပိုင်းမျှသာ ရှိသေးသည်။ ပြီးတော့ အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရသည့် လီးကြီးကလည်း ထိပ်ဖူးကြီး ပြောင်းတင်း၍ ငေါက်ငေါက်တောင် ထနေတော့ ခင်ရွှေတစ်ယောက် ….
ဆိုသော စကားလေးကိုသာ မပွင့်တပွင့်ပြောလျှက် သာစိန်၏ လီးကြီးကိုသာ ပြောင်လက်သော မျက်ဝန်းအစုံဖြင့် စိုက်ကြည့်လျှက် အသာငြိမ်နေလိုက်လေသည်။ ခဏအတွင်း မခင်ရွှေတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားရလေသည်။
“ ခင်ရွှေ…. ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်ပေးဟာ…”
“ တော် ကလဲ….”
ဒါပဲပြောပြီး မခင်ရွှေ လူးလဲထကာ ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်ပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အရှေ့ပိုင်းက ပြားပြားဝပ်ကာ အောက်ပိုင်းက ဒူးထောက်၍ ဖင်ကြီးကို ထောင်ထားသဖြင့် မော့တက်နေသော ဖင်ကြီး လုံးတစ်ကောက်ထွက်ကာ မက်မောစရာကြီး ဖြစ်နေသည်။
“ ဘာကြည့်နေတာလဲ…လုပ်မှာ လုပ်လေ…”
ဒီတော့မှ ခင်ရွှေ၏ ဖင်ကြီးကို ကြည့်ရင်း မအေးမြင့်၏ ဖင်ကြီးဟု မြင်ယောင်ကာ စိုက်ကြည့်နေမိသော သာစိန်က သူမ၏ နောက်ဖက်သို့ တိုးကပ်လိုက်သည်။
ခင်ရွှေလည်း စိတ်ထနေပြီ ထင်၏။ နောက်ဖက်သို့ စူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးများက ပြောင်တင်းခုံးတက်၍နေသည်။ တစ်ပင်စနှစ်ပင်စ စောက်မွှေးမဲမဲလေးတွေကလည်း နောက်ဖက်သို့ တစွန်းတစ ထွက်နေလေသည်။
လီးခေါင်းကြီးကို တေ့၍ ခင်ရွှေ၏ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲယူကာ လိုးသွင်းလိုက်သည်။
ခင်ရွှေတစ်ယောက် သာစိန့်လီးကြီးကို စိုက်ကြည့်ပြီးကထဲက စိတ်တွေကြွနေပုံရသည်။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အရည်တွေ စိုစိ၍နေပြီ။ သာစိန်က လီးကိုခပ်ဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်တာဆိုပေမယ့် လီးဝင်ဖူးသည်မှာ လပိုင်းမျှသာရှိသေးသော မခင်ရွှေ၏ စောက်ဖုတ်က ကျဉ်းကြပ်လွန်းလှပြီး သာစိန့်လီးကလည်း နဲနဲနောနောကြီး မဟုတ်တော့ မခင်ရွှေ အတော်လေး ခံလိုက်ရသည်။
လေအန်သံလေးနှင့် အတူ တအားပဲဟု မြည်တမ်းရင်း ဖင်နှစ်လုံးကို တောင့်ခံကာ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ခင်ရွှေ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆိုသော စကားကို မပြော။
နုညက်စိုစွတ်လှသော စောက်ခေါင်းနွေးနွေးကြီး၏ အတွေ့က မာန်ဟုန်ပြင်း၍ အကြောကြီးတွေ ဖောင်းထနေသော လီးကြီးကို လွှမ်းခြုံရစ်သိုင်း ထိတွေ့လာတော့ သာစိန်လည်း မခင်ရွှေကို မညှာတော့ပါ။
ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လာပြီး တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ခင်ရွှေ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဟ၍ ပါးစပ်ကလေးပွင့်ပွင့်သွားနေရလေသည်။
မအေးမြင့် သာစိန်တို့တဲနားရောက်တော့ လှမ်းခေါ်၍ အသံပြုမည်ဟု ကြံလိုက်သေးသည်။ ဒါပေမယ့် လာရသည့်ခရီးက မနီးလေတော့ မအေးမြင့် မောချင်နေသည်။ ပြီးတော့ တဲဆီမှလည်း လှုပ်ရှားသံတချို့က ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။
သာစိန်၏တဲရှိရာ ကုန်းကာဘေးဖက်မှ လှည့်ပတ်ဝင်ရသည်။ တဲရှေ့ကိုပတ်၍လျှောက်လာသော မအေးမြင့်တဲဝအရောက်တွင် လှမ်းနေသော ခြေထောက်က ဗြုန်းခနဲ ရပ်၍သွားသည်။
မအေးမြင့် ချက်ချင်းထိုင်ချလိုက်ပြီး တဲရှေ့ရှိ နွားစားကျင်းကြီးဘေးသို့ ပြေးကပ်လိုက်ရသည်။ မြင်ကွင်းက ရှင်းနေသည်။ လယ်တဲဆိုတာက အထဲတွင် အခန်းတွေဘာတွေ ကာထားတာမဟုတ်။ မအေးမြင့် ပထမဆုံး မျက်တောင်ခပ်ရန် မေ့သွားသည်။
ပြီးမှ မျက်တောင်ကို ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ရင်း ကြည့်သည်။ ကြည့်ရင်း မအေးမြင့်၏မျက်လုံးအစုံက တောက်ပ၍လာသည်။ လည်ချောင်းထဲက အလိုလို ခြောက်သွေ့၍လာသည်။
“ အင်း….ဟင်း….ကို သာစိန် ရယ်…အင်း…ကျွတ် ကျွတ်… ဖွတ်..ပလွတ်…အ…အ….ကျွတ်..ကျွတ်…အင်း..ဟင်း…….”
ထွက်ပေါ်လာသော မခင်ရွှေ၏ ညည်းသံသဲ့သဲ့က မအေးမြင့်၏ရင်ထဲ နင့်ခနဲနင့်ခနဲ ဖြစ်သွားကာ အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာသည်။
မခင်ရွှေ၏နောက်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်နေသော လီးကြီးက အရည်တွေစိုရွှဲနေပြီး ဒေါမာန်ထနေသည်မှာ မအေးမြင့်အတွက် ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းနေသည်။ ညည်းသံသဲ့သဲ့လေးဖြင့် မသံပေးရင်း နောက်ပြန်၍ကော့ဆောင့်ပေးနေသော မခင်ရွှေ၏ ဖင်ကြီးက မအေးမြင့်အဖို့ အားကျစရာ..။ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့၍ မချိမဆန့်လေး ဖြစ်ကာ ကောင်းချင်တိုင်း ကောင်းနေသော မခင်ရွှေ၏ မျက်နှာလေးက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသော မအေးမြင့်၏ ဒူးနှစ်လုံးကို တဆတ်ဆတ်ရိုက်လာစေသည်။
တစိမ်းတွေ မဟုတ်၊ မခင်ရွှေက မအေးမြင့်နှင့်ဆိုလျှင် ညီအစ်မနှစ်ဝမ်းကွဲလောက် တော်စပ်သည်။ သည်လို သွေးသားတော်စပ်မှုက မအေးမြင့်၏ ခံစားချက်တို့ကို ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာ ထန်စေသည်။
“ ဖွတ်…ပလွတ်…..အင်း…….ခင်ရွှေ..ငါ ထွက်တော့မယ်… ဖွတ်..ဗြစ်….အင်း…..”
“ အင်း….ကျ…ကျမ လဲ ထွက်တော့မယ်… နာနာလုပ်…လုပ်…….အမလေး….”
ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်မသော မအေးမြင့် တစ်ကိုယ်လုံး နတ်ပူးသလို တုန်လာသည်။ ခဏအတွင်းမှာပင် အမလေးချင်းဆက်ကာဆက်ကာ တရင်း ဖင်ကြီးရမ်းခါကာ ရှေ့သို့ ဟတ်ထိုးကျသွားသော မခင်ရွှေ၏ ခါးပေါ်သို့ တအားဖက်ရင်း မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့သွားသော ကိုသာစိန်မှာလည်း မှောက်ရက်သား ပါသွားတော့သည်။
မအေးမြင့် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေသည်မှာ တော်တော်နှင့် ငြိမ်မသွား။ အသက်မှန်မှန်ရှူရင်း ခဏကြာ ငြိမ်နေပြီးမှ မအေးမြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုသာစိန်နှင့် မခင်ရွှေတို့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်နေချေပြီ..။
အားယူ၍ မအေးမြင့် အသာလေးထလိုက်သည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး နုံးချိနေသည်။
“ ဟော…အေးမြင့်ပါလား… လာလေဟာ….”
သူမ ဘာပြောရမှန်း မသိခင် တဲရှေ့သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သော ကိုသာစိန်က စ၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
“ ဟို…….အရီးလေးက ညနေကို စပါးခြင်စရာ ရှိလို့ ဦးလေးသာစိန်ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့…”
မအေးမြင့် ပြောလည်းပြော တဲရှေ့တွင် ခြေတွဲလောင်းချ၍ ဝင်ထိုင်သည်။
“ အေးမြင့်…. ဖိုးအေးမိန်းမ မွေးပြီလား….”
“ မမွေးသေးဘူး..အစ်မ…ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ မွေးလိမ့်မယ်လို့ အရီးလေး ပြောတာပဲ…”
ထဘီရင်ရှားဖြင့် မခင်ရွှေအမေးကို မအေးမြင့်က နောက်သို့လှည့်မကြည့်ဘဲ ဖြေသည်။ မအေးမြင့် အသံကို မနည်းထိန်း၍ ပြောနေရသည်။
“ ခင်ရွှေ….အရီးလေးအတွက်..ကန်စွန်းရွက် ဆင်းခူးဟာ..များများခူး…နင့်အမေအိမ်အတွက်ပါ ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်…”
“ အင်း…ဟုတ်တယ်… လူကြုံမျှော်နေတာနဲ့ နင်ရောက်လာတာ အတော်ပဲ…”
တဲနှင့် ဝါးနှစ်ရိုက်လောက်အကွာတွင်ရှိသော ကန်စွန်းခင်းသို့ မခင်ရွှေ ထွက်သွားသည်။ ကိုသာစိန်က နောက်မှလိုက်သွားသည်။ တဲဘေးအရောက် ကိုသာစိန်က ရပ်၍ကျန်နေခဲ့ပြီး မခင်ရွှေ ကန်စွန်းခင်းထဲ ဆင်းတော့မှ သူက တဲရှေ့သို့ ပြန်၍ဝင်ခဲ့သည်။
ထိုအခိုက် သူမကိုယ်သူမ မလုံသော မအေးမြင့်က မတ်တတ်ရပ်၍ ထဘီလှည့်ဝတ်နေသည်။ ဝတ်လာသည့်ထဘီက အဝါခံ ပွင့်ရိုက်လေး..။ ထဘီတွင် အရည်တွေက စိုရွှဲ၍ ကွက်နေသည်က တစ်ထွာပတ်လည်မက..။
သာစိန်က မအေးမြင့်၏အနားသို့ လူချင်းတိုးထိမတတ် ကပ်ရပ်လိုက်ရင်း …
“ ဟ…အေးမြင့်…နင့်ထဘီမှာ ဘာတွေလဲ……”
အသံက တုန်နေသည်။ ပြန်လည်းပြော ထဘီကိုလည်း ကမန်းကတန်း ဝတ်ကာ ကွပ်ပျစ်ပေါ်သို့ ခြေတွဲလောင်းချ၍ ပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ ကိုသာစိန်ကို မကြည့်ရဲ…၊ မျက်လွှာချထားသည်။
ကိုသာစိန်နှင့်က လက်တစ်ကမ်းပင် မကွာ..။ မအေးမြင့်အား ကိုသာစိန်က အနီးကပ်တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေ၏။ မအေးမြင့် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာနေသည်။ အတော်လှတာပဲ…ဟူသော အတွေးဖြင့် ကိုသာစိန်တစ်ယောက် စောစောကမှ သူ့မိန်းမကို လိုးပြီးထားသော လီးက ပြန်၍တောင်ထလာသည်။
“ နင်..စောစောက ငါနဲ့ နင့်အစ်မ ခင်ရွှေတို့ကို ကြည့်နေတာ မဟုတ်လား…”
မအေးမြင့် အသားတွေ ဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး အသက်ရှူကြပ်လာသလို ခံစားလာရသည်။ ကိုသာစိန်၏အမေးကို မအေးမြင့် ဘာမှပြန်မဖြေမိ..။ ဒီနေရာမှ ထ၍ထွက်သွားရင် ကောင်းမလားဟူသော အတွေးမဆုံးမှီမှာပင် ကိုသာစိန်၏ လက်နှစ်ဖက်က သူမ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ် ရောက်လာသည်။
ဒီစကားနှစ်လုံးပင် မဆုံးလိုက်..။ ကိုသာစိန်က မအေးမြင့်အားငုံ့၍ ပါးဖွေးဖွေးမို့မို့လေးနှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းပစ်လိုက်သည်။ မအေးမြင့် ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေ ထ၍ တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်းသွားသည်။
ကိုသာစိန်က သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ရုတ်သိမ်း၍ မသွား..။ တိုး၍ဖက်ကာ မအေးမြင့်ကို နောက်သို့ဖိ၍ ချသည်။
“ လွှတ်….လွှတ်နော်…. အမခင်ရွှေကို အော်ခေါ်လိုက်မှာ…..”
“ အေးမြင့်…နင် ခံချင်လို့ အရေတွေ ဘဲထွက်နေပြီပဲ ဟာ….”
မိန်းမကျမ်းကြေခဲ့သော ကိုသာစိန်က မအေးမြင့်၏ အသံ မာန်မရှိတော့ကြောင်း သိလိုက်သည်။ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကိုလည်း လှုပ်သည်ဆိုရုံမျှသာ လှုပ်၍ရုန်းနေ၏။ ပြီးတော့ သူမ မောနေသည်။
“ ခဏလေးပဲဟာ… ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့… လုပ်ပါဟာ…နော်…..”
မအေးမြင့်၏ ကျောပြင်က ကြမ်းပြင်ကို ထိမိနေပြီ..။ သူမ၏ခြေနှစ်ချောင်းက တဲခါးပန်းတွင် တွဲလောင်း…။ ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုရင် မအေးမြင့်က ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲနေပြီး ကွပ်ပျစ်စောင်းတွင် ခြေတွဲလောင်းချထားသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေသည်။
ကိုသာစိန်က ပြောရင်း ခပ်ကားကားဖြစ်နေသော သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားခွဆုံသို့ ငုံ့၍ မျက်နှာအပ်ကာ အိစက်ဖောင်းမို့နေသော အပျိုကြီး မအေးမြင့်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထဘီပေါ်မှပင် သူ့နှာခေါင်းကြီးဖြင့် ထိုး၍ ထိုး၍ ဖိနမ်းသည်။
မအေးမြင့် ကြုံးထရန် ကြိုးစားရင်း တံတောင်နှစ်ဖက်ထောက်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကိုသာစိန့်လက်တစ်ဖက်က မအေးမြင့်၏ ပခုံးတစ်ဖက်ကိုကိုင်၍ တွန်းဖိထောက်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ချွတ်ချလိုက်သည်။ နဂိုက အင်္ကျီမဝတ်ရသေးသော ကိုသာစိန် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည်။
ကိုသာစိန်၏ လီးဒစ်ပြဲကြီးက တငေါက်ငေါက် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။ ဒါကြီးကိုပဲ မအေးမြင့် မှင်သက်မိ၍ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။
သူမ၏ ထဘီအား ကိုသာစိန်က လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှန်တင်ရန် ကြိုးစားခိုက် ခြေနှစ်ချောင်း လိမ်ထားသော မအေးမြင့်၏ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှ လီးကြီးကို စိုက်စိုက်ပါအောင်ကြည့်နေသော မအေးမြင့်က မျက်နှာကို ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် တစ်ဖက်သို့လွှဲပစ်လိုက်သည်။
“ ရှင်….ရှင်ပြောလို့ မရဘူးလား…ကျမ အော်လိုက်မှာနော်……”
“ အေးမြင့်ကလည်းဟာ…အခု ဘယ်သူမှမသိတဲ့ဥစ္စာကို…နင် လူသိအောင် လုပ်အုံးမလို့လား….”
ပြောလည်းပြော ကိုသာစိန်က ရုန်းရင်းကန်ရင်း ကွပ်ပျစ်စောင်းတွင် ကွေးလျက်လေးတင်နေသော မအေးမြင့်၏ ခြေထောက်တစ်ဖက်မှ ထဘီနှင့်လွတ်နေသော ခြေသလုံးသား ဖွေးဖွေးကြီးကို သူ့လီးတန်ကြီးနှင့် ဘေးတိုက် ပွတ်ထိုးသပ်လိုက်သည်။
မအေးမြင့် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်၍ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာသည်။ တစ်သက်လုံး ထိန်းသိမ်းလာသည့် သူမ၏ အပျိုစင်ဘဝ အဆုံးသတ်ရတော့မည်။ ဒီအသက်အရွယ်အထိ ရည်းစားပင် မထားဘူးခဲ့..။ တစ်ခုတော့ရှိသည်။ မြို့နယ်ကောင်စီရုံးသို့ စာရင်းပို့သည့်ကိစ္စ၊ လစာထုတ်သည့်ကိစ္စ ၊ ရုံးကိစ္စအဝဝဖြင့် ရောက်လျှင် မြို့နယ်ရုံးမှ စာရေးကြီး တစ်ယောက်က သူမကို လစ်လျှင်လစ်သလို ဖက်ဖက်နမ်းတတ်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး ကိုင်ချင်ရာ ကိုင်တတ်သည်။
အစတော့ ကျေးရွာကောင်စီ စာရေး မအေးမြင့် စိတ်ဆိုးသော်လည်း ဒီစာရေးကြီးက လူကြီးတွေအားလုံးကို ပိုင်သည်။ သူမကို ဟိုအဝေးကြီး ပင်လယ်ဝက ရွာတွေသို့ ပြောင်းပစ်လိုက်လျှင် အခက်..။ ပြီးတော့ လက်ဆောင်တွေလည်း ပေးတတ်သည်။ ဒါကြောင့် မအေးမြင့် ငြိမ်နေခဲ့ရသည်။
ကြာလာတော့ သာယာမိတာလည်း ပါတာပေါ့..။ ဒါပေမယ့် ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲက ပစ္စည်းကိုတော့ သူမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ခုတော့……
သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးပေါ်က ထဘီက ခါးထိလန်တက်သွားပြီ..။ သူမတစ်ကိုယ်လုံးလည်း အားအင်တွေက မရှိတော့ပေ။
“ အိုး….အ…အင့်…ဟင့် ဟင့်…..ဟင့်………………”
လက်သီးဆုပ်လောက် ခုံးထနေသော လက်တစ်ဝါးစာ မကသော စောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးပါးပါးလေးတွေ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလျက် ထွက်ပေါ်လာသည်။ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သော ကိုသာစိန်က ငုံ့၍ သူ့နှာခေါင်းကြီးဖြင့် နမ်းပစ်လိုက်ပြန်သည်။
သာစိန့်နှာခေါင်းထိပ်က မအေးမြင့် စောက်စေ့ကို မိမိရရ ပွတ်၍ထိမိသွားသည်။ သာစိန် အံ့သြသွားသည်။ နဲနဲနောနော စောက်စေ့မဟုတ်..။ ဇီးကင်းလောက်ပင် ရှိမည် ။ ပြူးထွက် တောင်တက်နေသည်။
မအေးမြင့်ကတော့ ခါးလေးကော့ကာ ဆတ်ခနဲတုန်သွားပြီး တဟင့်ဟင့်ဖြင့် ကြိတ်၍ငိုပါတော့သည်။ သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲကား၍ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်ရပ်လိုက်တော့ လီးထိပ်နှင့် စောက်ပတ်ကြီးက ချိန်စရာမလို တည့်တည့်မတ်မတ် အံကိုက်လျက် လီးထိပ်ကို စောက်ပတ်ဝသို့တေ့၍ အသာလေး ဖိသွင်းလိုက်သည်။
မအေးမြင့် တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ လီးထိပ်ကြီး တစ်ဝက်လောက်အဝင် လက်မထိပ်ဖြင့် စောက်စေ့ကြီးကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးရင်း လီးကြီးကို ထပ်၍ဖိထိုးသွင်းသည်။
စောက်ဖုတ်ကြီးက ခုံးခနဲ ကော့တက်လာပြီး စောက်ရည်လေးများ စီးခနဲ လီးထိပ်ကြီးဘေးမှ တိုး၍ထွက်ကျလာသည်။ မအေးမြင့် အငို ရပ်သွားပြီ..။ အသက်ရှူသံတွေ တဟင်းဟင်းဖြစ်ကာ ရောက်ယက်ထနေပြီး ဘေးတွင်ချထားသော လက်ဖဝါးလေးများက ဆုတ်ချည်ဖြန့်ချည် ဖြစ်နေသည်။
စောက်ရည်တွေက မြင်မကောင်းအောင် ထွက်လာသည်။ အချိန်သိပ်မရှိတော့ကြောင်း သာစိန် သတိရလိုက်သည်။ လီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဆောင့်၍ဖိသွင်းလိုက်သည်။
တစ်ခါတည်းနှင့် လီးကို တဆုံးသွင်းချပစ်လိုက်သည်။ ခါးလေးအတော်ကြီးကော့တက်ကာ သတိလက်လွတ် အော်တော့မည့် မအေးမြင့်၏ပါးစပ်ကို လက်ဝါးတစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းပိတ်လိုက်ရသည်။
လီးက အိဖောင်းနေသော မအေးမြင့်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ တဆုံးဝင်နေပြီဖြစ်သည်။ မအေးမြင့်၏ ဖင်ကြီးတွေက ဘယ်စောင်းညာလှိမ့်ဖြင့် ကော့ကော့တက်နေသည်။
လီးမဝင်ဖူးသေးသည့် စောက်ဖုတ်မို့ လီးကို လက်ဖြင့်ဖမ်းဆုတ်ထားသလို ကြပ်ညှပ်တင်းပြည့်၍နေသည်။
စောက်ဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးဝင်နေသော လီးကြီးမှာ သံချောင်းကြီးတစ်ချောင်းထိုးထည့်ထားသလို ခိုးလိုးခုလုကြီးဖြစ်လျက် မအေးမြင့်မှာလည်း လည်ချောင်းထဲသို့ပင် ပျို့တက်ချင်နေသည်။
ပြီးတော့ သူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲက တစ်စုံတစ်ခုသော ခံစားချက်တစ်ခုကို ပြင်းပြစွာ လိုလား၍ နေသည်။ ထို့ကြောင့် အားမလိုအားမရနှင့် သူမ၏စအိုကို ရှုံ့ရှုံ့သွင်းလိုက်မိလေတိုင်း စောက်ခေါင်းထဲမှ အသားမျှင်များက လီးကြီးကို အထဲသို့ဆွဲ၍ ဆွဲ၍ သွင်းသလိုဖြစ်နေသည်။
ရှက်ရမှန်း မအေးမြင့် သတိမရတော့..။ တအင်းအင်းဖြင့် မျက်လုံးစုံမှိတ် ညည်းတွားရင်း စအိုလေးကို ရှုံ့ရှုံ့သွင်းကာ စောက်ဖုတ်ကို ကော့၍ ကော့၍ မော့တင်ပေးနေမိတော့သည်။
မိန်းမဆို ဘာမထီတဲ့ သာစိန်တစ်ယောက် သူ့တူမလောက်သာရှိသော မအေးမြင့်နဲ့ကျမှ မေးကြောကြီးတွေ ထောင်လာပြီး ဒူးတုန်လာသည်။ ကောင်းလိုက်တာလည်း မပြောနဲ့တော့..။ လင်းဆွဲလည်း မဆွဲထားဘူး၊ စောစောကလည်း မခင်ရွှေကို လိုးမထားခဲ့ဘူးဆိုလျှင် သာစိန် လီးသွင်းရုံနှင့် လူပျိုလေးတစ်ယောက်လို ပြီးသွားလောက်နေပြီ..။
လီးတဆုံးသွင်းထားပြီး မအေးမြင့်၏ အခြေအနေကို အကဲခတ်လိုက်ပြီး သိပ်ပြီးနာကျင်နေပုံမရသဖြင့် ဆက်လိုးရန် စဉ်းစားလိုက်သည်။
မအေးမြင့်က အသက် ၃၀ နားနီးနေပြီဆိုတော့ ခံနိုင်ရေတော့ တော်တော်လေး ရှိနေပါပြီ..။
စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်သည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အသားလေးတွေက လီးကို အပြင်သို့ အထုတ်မခံချင်။ အတင်းဆွဲညှစ်ထားကြသည်။ ထို့အတူ မအေးမြင့်၏ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကိုသာစိန်၏ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို လှမ်း၍ ဖမ်းဆုတ်ထားသည်။
ဖြေးဖြေးချင်းလီးကို ဆွဲအထုတ် မေးဖျားလေး မော့တက်လာသော မအေးမြင့်၏ ပါးစပ်လေးမှာ တဖြေးဖြေးချင်း ဟ၍ ဟ၍လာသည်။
သာစိန် လေးငါးချက်မျှပင် ဆောင့်လိုက်ရသေးသည်။ မအေးမြင့်၏ ဖင်ကြီးကော့တက်လာကာ သူမ၏ခေါင်းလေး သွက်သွက်ခါသွားအောင် ဘယ်ညာရမ်းခါသွားသည်။
စီးခနဲ စီးခနဲ လီးနှင့် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြားမှ ထွက်လာသည့် အရည်တွေမှာလည်း တပုံတပင်ကြီး ဖြစ်သည်။ ကောင်းမလေး ပြီးသွားသည်..။ သူလည်း ပြီးချင်နေပြီ..။ သာစိန် ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးသည်။ မအေးမြင့် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်၍ မာန်တင်းခံသည်။ ခဏအတွင်း စောက်ခေါင်းထဲမှ ညှစ်ဆွဲအားကြောင့် ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာကာ လီးကြီး ဆိမ့်တက်လာသည်။
ပွဲသိမ်းဆောင့်ချက်များကို ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်သည်။
မခင်ရွှေ၏ အသံ…၊ ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေသော လီးကြီး ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ဗြုံးခနဲ သာစိန် ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
အပြင်ရောက်မှ ပြီးသွားသည်။ သာစိန်က သူ့လီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်လိုက်သည်။ လီးထိပ်က သုတ်ရည်တစ်စက်က ပြွတ်ခနဲ ထွက်ကာ မအေးမြင့် ဆီးစပ်သို့ ကျသည်။
မအေးမြင့် ကြုံးထ၍ ကွပ်ပျစ်အောက် မြေကြီးပေါ်မှနေ၍ သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် မတ်တတ်ရပ်ထားသော ကိုသာစိန်၏ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖက်ကာ သူမ၏ခေါင်းက သာစိန်၏ရင်ဘတ်သို့တိုက်ကာ လီးကြီးကို ကြည့်သည်။ သာစိန်၏ လက်တစ်ဖက်က မအေးမြင့်၏ကျောကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ တစ်စက္ကန့်အတိုင်းအတာအတွင်းသာ ရုတ်ချည်း ဖက်တွယ်လိုက်မိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သာစိန်၏ ခါးကြီး ကော့ခနဲ ကော့ခနဲဖြစ်ကာ လက်ဖြင့်ဆုတ်ထားသော လီးကြီးက သုတ်ရည်တို့ ပြွတ်ခနဲ ပြွတ်ခနဲ ပန်းထွက်လာကြတော့သည်။
“ ကိုသာစိန်…ကိုသာစိန်…..လာပါအုံး…ဒီမှာ ကနဂုတ်ကြီးလား မသိဘူး…တော့…”
မခင်ရွှေ၏ အသံအဆုံး မအေးမြင့်၏ပါးကို ရွှတ်ခနဲနေအောင် နမ်းပြီး ခြေဖျားတွင် ကွင်းလုံးကျွတ်ကျနေသော ပုဆိုးကို ကောက်စွတ်၍ တဲဝတွင်ထောင်ထားသော ဆောင်ဓါးကို ယူ၍ ကိုသာစိန် မခင်ရွှေရှိရာ ကန်စွန်းခင်းသို့ ပြေးထွက်သွားပါတော့သည်။
( ကနဂုတ်ဆိုသည်မှာ မြွေလိုသတ္တဝါမျိုး ၊ ခေါင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြီး မြွေလောက် အဆိပ်မပြင်းသော်လည်း အဆင်မသင့်လျှင် သေတတ်သည်။ ပြီးတော့ သတ်၍စားမည်ဆိုပါက ငါးရှဉ့်ဟင်းထက်ပို၍ လေးလေးပင်ပင် စားကောင်းလှပါသည်။ )
မအေးမြင့် ပြန်ပြီး စဉ်စားမိလိုက်တိုင်း ကြက်သီးလေးတွေ ထရင်း ထိုနေရာလေးမှ ထွေးထွေးနွေးနွေးလေးဖြစ်ကာ တစ်မျိုးလေး ခံစားရသည်။ လက်ဖဝါးလေးဖြင့် ထဘီပေါ်မှပင် ယောင်ယမ်း၍ စမ်းလိုက်မိသည်။ သူမ၏ ဆီးစပ်နေရာလေး..။ တစ်နေ့က ကိုသာစိန်၏ သုတ်ရည်စက်လေး ထိမှန် ကျရောက်ခဲ့သည့် နေရာလေး..။
ပြင်ပအရေပြားပေါ် နေရာမှာပင် ဤမျှလောက်ထိတွေ့ခံစားနေရလျှင် စောက်ခေါင်းအဆုံး သားအိမ်ထဲသာ ထိမှန်ခဲ့လျှင် ဟူသော စိတ်ကူးဖြင့် မအေးမြင့် စဉ်းစားတွေးတောမိရင်း ခံစားချင်နေမိသည်။
စဉ်းစားရင်း မအေးမြင့်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ စိမ့်ခနဲ ခံစားမှုတစ်ခု ဝင်ရောက်လာသည်။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများ စစ်ခနဲ တင်းခနဲဖြစ်သလို ခံစားလိုက်ရမိသည်။
သူမ၏စိတ်အစဉ်တွင် သူမအား မက်မက်ရရ လိုးနေသော ကိုသာစိန်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဟန်ပန်..။ ပြီးတော့ အရည်တွေစိုရွှဲနေသော လီးချောင်းကြီး..။ ထိုလီးကြီး ဆတ်ခနဲ ငေါက်ခနဲဖြစ်ကာ တပြွတ်ပြွတ် ထွက်လာသော ဖြူဖွေးသည့်သုတ်ရည်စက်များ…။ တစ်ခုချင်း ရုပ်ရှင်အနှေးပြကွက်ကြည့်နေရသလို ပြန်၍မြင်ယောင်လာသည်။
မအေးမြင့်၏ နားရွက်ဖျားလေးများ ပူပူထူထူလေး ဖြစ်၍လာသည်။ အမြင်လေးများကို ပြန်တွေးမိရင်း အဲဒီတုန်းက ခံစားခဲ့ရသည့် ခံစားချက်ကလည်း ရောင်ပြန်ဟပ်လာသည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသော မအေးမြင့် နေရာပြင်၍ထိုင်လိုက်ရင်း ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းတစ်ချက် ချလိုက်ရာမှ ပေါင်ပေါ်သို့တင်ထားသော မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ဖွင့်လိုက်ကာ ရှေ့နားမှ ဖယောင်းတိုင်တင်ထားသော နို့ဆီခွက်ကို အနားသို့ ဆွဲလိုက်သည်။
ဒီမှာတင် မအေးမြင့်အကြည့်က ရှေ့နားတွင် ရှိသော ထောင်ထားသည့် ဇာခြင်ထောင်အတွင်းသို့ ရောက်၍သွားသည်။ ဇာခြင်ထောင်ပါးပါးလေးအတွင်းတွင်တော့ နီတွတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ပက်လက်လေး အိပ်မောကျနေသည်။ မအေးမြင့် နီတွတ်၏မျက်နှာလေးကို စိုက်၍ကြည့်နေမိသည်။ အသက်က ၁၆ ၊ ၁၇ နှစ်လောက် ရှိပြီ..။ မျက်နှာလေးက နုနယ်၍ ငယ်စဉ်ကထဲက အလုပ်ကြမ်း လုပ်လာရသည်မို့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တောင့်တင်းသန်မာလှသည်။
လူမမယ်ကလေးထဲက နီတွတ်ကို အရီးလေးနှင့် မအေးမြင့်က ခိုင်းစရာရှိခိုင်း..၊ ကျွေးစရာရှိ ကျွေး ၊ ပေးစရာရှိ ပေးဖြင့် သူတို့လက်ပေါ်တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသော နီတွတ် ဖြစ်သည်။
ကနေ့ည ဖိုးအေးမိန်းမ မျက်နှာမြင်မည်ဖြစ်၍ အရီးလေးက ညသွားအိပ်ရသဖြင့် နီတွတ်ကို မအေးမြင့်နှင့် အဖော် လာအိပ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ အရင်ကလည်း အရီးလေး ညအိပ်ညနေသွားလျှင် နီတွတ်က မအေးမြင့်နှင့် အဖော်လာလုပ်နေကျဖြစ်သည်။
နီတွတ်ရောက်လာကထဲက အရက်နံ့ ရနေသည်။ ဒါက ရပ်ရွာဓလေ့စရိုက်အရ မဆန်းတော့..။ မိန်းမသားချည်းနေသော အိမ်ဖြစ်၍ နီတွတ်ကို အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်သာ အိပ်ရာပြင်ပေးခဲ့သည်။
၁၀ နာရီကျော်မှ အိပ်တတ်သော မအေးမြင့်က ၉ နာရီခန့်သာရှိသေး၍ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်း နီတွတ်၏အိပ်ရာအနီး၌ပင် ထိုင်၍ မဂ္ဂဇင်းဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ကျီချွတ်ဖြင့် အိပ်ပျော်နေသော နီတွတ်၏ကိုယ်လုံးက ထွားကြိုင်းသန်မာလှသည်ကို အတိုင်းသားတွေ့နေရသည်။
မအေးမြင့် သူမ၏မျက်လုံးကို မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ဆီသို့ ပြန်ပို့လိုက်ရင်း စိတ်က ကိုသာစိန်၏ကိုယ်လုံးနှင့် နီတွတ်၏ကိုယ်လုံးတို့ကို ယှဉ်၍ စဉ်းစားကြည့်နေမိသည်။
နုပျိုခြင်းသာလွန်သူ နီတွတ်၏ခန္ဓာကိုယ်က ပို၍စွဲမက်ချင်စဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ နီတွတ်ထံမှ လွန့်လူးသံကြားလိုက်ရသည်။ မအေးမြင့်၏အကြည့်က နီတွတ်ထံရောက်၍ သွားပြန်သည်။ မအေးမြင့်သည် နီတွတ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မက်မောမိသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
ဒီလိုတွေးမိပြန်တော့ ရင်ထဲမှာ ခံစားဖူးသော လှိုင်းငယ်လေးများ လှုပ်ခတ်လာရတော့သည်။ လက်ထဲမှ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ဘေးသို့ချလိုက်ပြီး နီတွတ်ကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်မိသည်။ မိမိရှိရာဖက်သို့ လှည့်ကာ စောင်းအိပ်နေသော နီတွတ်က အိပ်မောကျနေဆဲပင်..။
ပြေလျော့နေသော သူ့ပုဆိုးက ဝမ်းဗိုက်ကို ဖုံးမထားနိုင်…၊ ဆီးစပ်ပင် လက်နှစ်လုံးလောက် ပေါ်နေသည်။ မအေးမြင့် ပုဆိုးနဲ့လွတ်နေသော နီတွတ်၏ဆီးစပ်ကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ပြေလျော့နေသော ပုဆိုးကို အားမရချင်သလို ဖြစ်မိသည်။
သူမဘာသာ သတိမထားလိုက်နိုင်ခင်မှာပင် မအေးမြင့် ခြင်ထောင်ဘေးသို့ တိုး၍ထိုင်လိုက်မိရာက တုန်ယင်နေသော လက်ဖြင့် ခြင်ထောင်စကို မ၍ဝင်လိုက်သည်။
ပြေလျော့နေသော နီတွတ်၏ပုဆိုးကို အသာအယာဖြည်၍ အောက်ဖက်သို့ ခပ်ဖြည်းဖြည်း ဆွဲယူလျှောချကြည့်မိသည်။
တထိတ်ထိတ်ခုန်နေသော ရင်ကို တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားရင်း တံတွေးတစ်ချက်ကြိတ်၍ မြိုချလိုက်မိသည်။ ထိုအခိုက် လှုပ်သွားသော နီတွတ်ကြောင့် ရင်ထဲ ဒိတ်ခနဲဖြစ်သွားရပြီး စောင်းအိပ်နေရာမှ ပက်လက်လှန်လိုက်သော နီတွတ်ကို ရင်တလှပ်လှပ်ဖြင့် ကြည့်မိသည်။
လျှောကျနေသော ပုဆိုးအောက်မှ နီတွတ်၏ လီးက တစ်ဝက်ခန့် ပေါ်လာသည်။ မအေးမြင့်သည် မြင်ကွင်းကို အားမရစွာ ကြည့်ရင်း ပုဆိုးကို ဖြေးဖြေးအောက်သို့ ဆက်၍ဆွဲလျှောချသည်။ ဘွားခနဲပေါ်လာသော ပစ္စည်းကြီးက အရွယ်နှင့်မမျှအောင် တုတ်၍ရှည်နေကာ ပျော့ခွေခွေကြီးဖြစ်နေသည်။
ဒစ်ဖျားနီနီပေါ်တွင် အရေခွံက တစ်ဝက်ခန့်ဖုံးနေသည်။ ထို့ပြင် လုံးလုံးတစ်တစ် ဂွေးဥနှစ်လုံးက အမွှေးနက်လေးတွေ ကျိုးတိုးကျဲတဲပေါက်ကာစသာ ရှိသေးသည်။ မအေးမြင့် အသိတရားများ လွင့်ပျယ်ပျောက်ကုန်ပြီ..။ ဘာကိုမှ မသိတော့..။ နီတွတ်၏လီးကြီးကို လက်ဖြင့်အသာအယာ ဆုပ်ကြည့်မိသည်။
ခပ်ပျော့ပျော့လီးက နင့်နင့်နဲနဲလေး လက်ဆုပ်ထဲပါလာသည်။ ပြီး ဖုံးနေသော အရေပြားကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဆွဲချလိုက်သည်။ နီနီရဲရဲထိပ်ဖူးက ဒစ်ကားကားဖြင့် ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားလျက်က နည်းနည်း မာလာသလို ခံစားသိရှိလိုက်ရသည်။ အခုမှတော့ မထူးတော့ပြီ..။
နီတွတ်၏ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးကျွတ်အောင် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ နီတွတ် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည်။ မအေးမြင့် စိုက်ကြည့်နေပြီးမှ သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အင်္ကျီကို ချွတ်၍ခြင်ထောင်အပြင်သို့ လက်လှမ်းပြီး ထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ထမီကို ဖြည်ကာ ရင်ဘတ်ထိဆွဲတင်လိုက်ပြီး နီတွတ်၏ဘေးတွင် အသာကပ်၍လှဲအိပ်ချလိုက်သည်။
နီတွတ်၏လီးကို ဆုတ်ချည်နယ်ချည်ပြုကာ အရည်ပြားကို ထက်အောက်ရွေ့လျားပေးနေမိသည်။ လီးကြီးက လက်ထဲတွင်ပူနွေးနေပြီး ဆတ်ခနဲ ထောင်ထလာသော အတွေ့ကို ကြည်နူးခံစားမိသည်။ ရုတ်ချည်း မာကျောလာသော လီးကြီးကို အားမလိုအားမရဖြင့် အားစိုက်၍ဖြစ်ညှစ်လိုက်မိသည်။
နီတွတ် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ သူ့ကိုပြုံး၍ကြည့်နေသော မအေးမြင့်က သူမ၏ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ထမီကို အောက်သို့ ဆွဲချပြလိုက်သည်။ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးအရွယ် နို့လေးနှစ်လုံးက ဝင်းမွတ်စွာ လှုပ်ခနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်။
နီတွတ်ကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါ..။ ရွာတွင် မိုးရာသီဆို ပုဇွန်ထောင်..၊ နွေဆို အင်းထဲတွင် အနေများ၍ လူကြီးများ မြှောက်ပင့်ပေးသဖြင့် အတွေ့အကြုံ တစ်ကြိမ်မက ရှိခဲ့ဖူးပြီးသားပါ..။
နီတွတ် မအေးမြင့်ဖက်သို့ စောင်းကာ မျက်နှာချင်း ဆိုင်လိုက်သည်။ သူ့ကို ပြုံး၍ကြည့်နေသော မအေးမြင့် မျက်လွှာချ၍အသွား ပါးတစ်ဖက်ကို ဖိ၍နမ်းလိုက်ပြီး ချက်ချင်းပင် သူမျက်နှာက မအေးမြင့်၏ ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ ရောက်သွားသည်။
တခဏအတွင်း မအေးမြင့်မှာ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာတင်းတင်းစေ့၍ ရင်ဘတ်လေး ကော့တက်လာရသည်။ နီတွတ် နို့စို့ အတော်သန်တာဘဲ ဟု တွေးမိသည်။ နီတွတ်က မအေးမြင့်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ထဘီကို အောက်ဖက်သို့ ဆွဲ၍အချွတ် ဒူးဆစ်လောက်အရောက်သွားတွင် မအေးမြင့်က ခြေနှစ်ချောင်းကို ပွတ်၍သူမ၏ထဘီကို ကန်ထုတ်ကာ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ နီတွတ်၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ပေါင်ကြားသို့ ရောက်အသွား ပေါင်နှစ်လုံးကို ဟပေးလိုက်သည်။
စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လက်ခလယ်နှင့် ပွတ်တိုက်ပြီး အပေါက်ဝလေးသို့ အသာဖိ၍ ထိုးလိုက်ရာ မအေးမြင့်သည်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသော ရင်ဖြင့် တိုးညှင်းစွာ ညည်းလိုက်မိသည်။
ခဏအတွင်း နီတွတ်သည် မအေးမြင့်၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ခပ်ကားကားဖြစ်နေသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ဝင်၍ နေရာယူလိုက်ပြီး အမွှေးများဖြင့် မို့မောက်နေသော မအေးမြင့်၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို ဖြဲကာ အရည်များ ရွှဲနစ်နေပြီဖြစ်သော စောက်ခေါင်းအဝသို့ လီးထိပ်တေ့ကာ တစ်ရစ်ချင်း ဖိသွင်းလိုက်သည်။
မအေးမြင့်သည် ဖင်ကြီးကို ကော့တင်ပေးရင်း နီတွတ်ကို ဆွဲ၍ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ အဆုံးထိဝင်သွားသော လီးကြီးကို ပြန်နှုတ်လိုက် လိုးသွင်းလိုက်ဖြင့် လက်တစ်ဖက်ကလည်း မအေးမြင့်၏ နို့တစ်ဖက်ကို ဆွဲချေပေးနေသည်။
“ နီတွတ်…မောင်လေးရယ်… အင်း.ဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ…ကွယ်…အင်း….”
မပီမသ စကားလုံးတို့ဖြင့် မပွင့်တပွင့်လေး ညည်းသည်။ နီတွတ်ကလည်း မအေးမြင့်၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲပြီး အားဖြင့် ဆောင့်၍ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးသည်။ မအေးမြင့်ကလည်း သူမ၏ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးကာ နီတွတ်၏ကျောပြင်ကြီးကို မလွတ်တမ်း ဖက်ထားမိသည်။
“ အား….ကောင်း………ကောင်းလိုက် တာ…ကွာ… အိုး…….အ..အမေ့…..”
ညည်းသံအဆုံး သံရှည်ဖြင့် ညည်းလိုက်ရင်း မအေးမြင့် မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့သွားရာမှ တစ်ကိုယ်လုံး ကော့တက်သွားသည်။
ပြီးချင်နေသော နီတွတ်၏ ဆောင့်ချက်များက ပို၍ ပြင်းထန်လာသည်။ ကော့တက်သွားသော မအေးမြင့် ငြိမ်ကျသွားခိုက်..အင်း ခနဲ အသံတစ်ချက်ပြုကာ နီတွတ်က လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးပင် အတင်းဖိကပ်စိုက်ထည့်ပြီး သုတ်ရည်များကို ပန်းထည့်လိုက်သည်။
ပြစ်ခဲနေသော သုတ်ရည်ပူပူတို့က မအေးမြင့်၏ သားအိမ်နုနုအတွင်းသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပန်းဝင်သွားတော့သည်။
မအေးမြင့်တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး မျက်ဖြူလေးများပင် လန်၍လန်၍ သွားရလေတော့သည်…။